Ithegi: Ukubhida i-AEO | Martech Zone
Ithegi: Ibhidi ye-AEO
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu Zininzi iindlela zokuphucula ukusebenza kwephulo. Yonke into evela kumbala kwifowuni yokwenza iqhosha lokuvavanya iqonga elitsha inokukunika iziphumo ezingcono. Kodwa oko akuthethi ukuba yonke i-UA (ukuFunyanwa koMsebenzisi) iqhinga lokusebenzisa oya kuthi usebenze kulo ulifanele ukwenza. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba unezinto ezinqongopheleyo. Ukuba ukwiqela elincinci, okanye uneengxaki zohlahlo-lwabiwo mali okanye iingxaki zexesha, ezo zithintelo ziya kukuthintela ekuzameni